I-LG Tone Free HBS-FN7: Ukukhanselwa komsindo okusebenzayo nokunye okuningi | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 28/04/2021 10:00 | General, Izibuyekezo
Sibuyela kumthwalo ngokuhlaziywa komkhiqizo ozwakalayo, kulokhu kusuka enkampanini yaseNingizimu Korea LG esanda kwethula ama-headphone ayo aphezulu "aphezulu ebangeni" emakethe, lawo ebesiwahlola isikhathi eside nokuthi sizokhuluma nawe isikhathi eside.
Zitholele nathi i-LG Tone Free HBS-FN7, amahedfoni anecala lokubulala amagciwane, ukukhanselwa komsindo nokusebenza okumangazayo. Sizokutshela ukuthi okuhlangenwe nakho kwethu okuphelele kube yini ngalawa mahedfoni anikeze okuningi ukukhuluma ngakho muva nje nokuthi ube yini umphumela ngemuva kokudlula etafuleni lethu lokuhlaziya.
Ngalesi sikhathi sikhuluma ngama-headphone aphezulu phezulu kwephiramidi yama-headphone we-TWS ngokukhanselwa komsindo, kokubili ukusebenza nentengo. Zifana ncamashi nedivayisi yangaphambilini evela ku-LG uqobo engakadluli etafuleni lethu lokuhlaziya, i-finn e-FN6 futhi enenani eliqukethwe kakhulu kunalolu hlobo ngoba zitholakala kuma-euro angama-99, ngokungabonakali kwe- ukukhanselwa komsindo okusebenzayo. Sikhuluma ngalo mzuzu mayelana I-LG Tone Free HBS-FN7 (ngemuva kwalokhu i-LG FN7).
3 Ukuzimela nekhwalithi yomsindo
4 Ukukhanselwa komsindo okusebenzayo nombono womhleli
Umkhiqizo ukhethe ukuklama nokwenziwa "kwe-premium". Kungumuzwa esinawo ngokushesha koxhumana nabo bethu bokuqala ngokupakisha kanye nomkhiqizo uwonke. Sinezakhiwo zepulasitiki ezimnyama ngokuphelele zophiko esiluhlolile kanye nohlelo lwendlebe ngokuya ngesipika samahedfoni, into ebalulekile lapho sikhuluma ngamadivayisi ane-ANC (Active Noise Cancellation for an acronym in English). Icala lokushaja liyisiyingi ngokugcwele ngombala ofanayo oshiwo ngenhla. Kodwa-ke, singazithenga zimhlophe uma sifisa, le mibala emibili iyiphalethi etholakalayo.
Ubukhulu we ibhokisi: X x 54,5 54,5 27,6 mm
Ubukhulu of the amahedfoni: X x 16,2 32,7 26,8 mm
Icala lokushaja line-LED ekhomba ukusebenza kwamahedfoni futhi akukhulunywa ngophawu lwangaphandle, into enelukuluku. Yenziwe ngepulasitiki ye-matte, ngokungafani namahedfoni uqobo, futhi imelana kahle neminwe yeminwe. Ihlangene futhi ilingana kahle ephaketheni lakho, ine-USB-C ngemuva kwesembozo nenkinobho yokuvumelanisa ohlangothini lwesobunxele.
Ngale ndlela, sinemininingwane emangazayo yokuthi amahedfoni akhipha ukukhanya kwe-UV kumahedfoni ukuqeda amabhaktheriya, uhlelo I-UVnano ye-LG ithembisa ukunciphisa amabhaktheriya ngama-99,9% ngemizuzu eyi-10 nje yokuvezwa kohlelo lwakho. Kodwa-ke, sikuqinisekisile ukuthi lokhu kukhanya kwe-UV akwenzeki imizuzu eyi-10 kepha kwenzeka imizuzwana embalwa.
Sibhekene namahedfoni anamapayipi we-silicone we-hypoallergenic nokumelana namanzi ngesitifiketi se-IPX4, ngakho-ke singakusebenzisa usuku nosuku maqondana nokuqeqeshwa noma imvula encane.
Uhlelo lokusebenza lwe-IOS
Ezingeni lokuxhuma sine-Bluetooth 5.0, kanye nethuba lokuxhumanisa kokubili i-Android ne-iOS ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-LG Tone Free olungalandwa ngokuskena ikhodi ye-QR efakwe ebhokisini. Engxenyeni yezobuchwepheshe i-LG inikeza imininingwane encane kakhulu yezobuchwepheshe, ngakho-ke kufanele sigxile kakhulu emizweni abasishiya besebenzisa yona ngokuhlolwa kwethu. Banemakrofoni ababili abaphindwe kabili kanye nezinye izindlela zokuSusa i-Active Noise (ANC) esingakwazi ukuyilungisa ngokuxhumana namahedfoni ngokusebenzisa ipaneli yokuthinta lapho singadlala khona umculo noma siphendule izingcingo.
Ukuzimela nekhwalithi yomsindo
Isigaba esiphawuleka ngamathuba okwenza ngaphandle kokushaja okudala kwe-USB-C, ukushaja okungenantambo okujwayelekile kwe-Qi ngokukubeka kusisekelo sendabuko sokushaja. Ngokuqondene nebhethri sine-55 mAh ye-earphone ngayinye ne-390 mAh case. Inkampani isithembisa amahora ayi-7 ngama-headphone nokunye okungu-14 uma sifaka ibhokisi lokushaja. Ekuvivinyweni kwethu sithole cishe u-5h 30m wokuzimela ngomsindo wokucisha usebenze. Vele, kuyaphawuleka ukusho lokho kwe- I-USB-C singathola ukukhokhiswa kwehora elilodwa lokusetshenziswa cishe nemizuzu emihlanu yokukhokhiswa.
I-Codec: I-AAC / SBC
Ngokuqondene nomsindo, i-LG iphinde ivule i-Meridian Audio's Digital Signal Processing, noma kunjalo, izindlela ezine zokusetshenziswa kohlelo lwakho lokusebenza ezisivumela ukuthi sizilungise zenze umsindo wekhwalithi ephezulu. Simake kahle ama-bass kepha lokho akuwahlanganisi amazwi. Asinayo i-Qualcomm's aptX codec, kepha asibonanga mehluko omkhulu kakhulu ngamahedfoni enza njalo. Isipiliyoni sethu besiyanelisa futhi sihambisana nenani esilikhokhele lo mkhiqizo, yize mhlawumbe kungenzanga izimbangi ezifana ne-AirPods Pro (ebiza kakhulu).
Ukukhanselwa komsindo okusebenzayo nombono womhleli
Inkampani isithembisa ukuthi sinemakrofoni emithathu yokukhansela umsindo yize ibhekisa kwemibili yayo ezingxoxweni. Kulokhu, amahedfoni aphendula kahle ekusebenzeni okudingekayo ukushaya izingcingo. FUTHIUmsindo osekelwa yi-diaphragm yawo engqimba emibili wenza isipiliyoni sibe sihle kakhulu uma ucabanga ukuthi sikhuluma ngama-headphone we-TWS asezindlebeni. Ngakho-ke ngokuvamile kubonakala sengathi sithola umkhiqizo oyindilinga.
Ungathola i-LG Tone Free FN7 kusuka ku-178 kuwebhusayithi yakho noma ngisho ngentengo yokuncintisana kakhulu kusuka kuma-euro angama-120 e-Amazon.
Lawa ma-headphone aveza kakhulu ngombala omnyama, enedizayini ethe xaxa futhi nenhle, okungaba ngumbala esiwuncomayo. Sithemba ukuthi ukuthande ukuhlaziywa kwethu kwe-LG Tone Free FN7 evela enkampanini yaseNingizimu Korea futhi-ke siyakukhumbuza ukuthi ungasishiya nemibuzo ngakho ebhokisini lokuphawula. Ngendlela efanayo, sikukhumbuza ukuthi ungabhalisela isiteshi sethu se-YouTube lapho sishiya khona okuqukethwe okuningi okuthakazelisayo ongeke ufune ukukulahla.
Ithoni yamahhala FN7
Kuthunyelwe ku: 28 Apreli 2021
Ukulungiswa kokugcina: 27 Apreli 2021
Impela izinto ze-premium kanye nokuklanywa
I-ANC nokuzimela okuhle
Uhlelo lokusebenza lomngane
Uhlelo olwenziwe lula kakhulu lokuthinta
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-LG Tone Free HBS-FN7: Ukukhanselwa Komsindo Osebenzayo nokuningi Okuningi
Wina i-Star Wars PS4, ama-DVD namathoyizi. Bamba iqhaza futhi uthole iWinX DVD Ripper mahhala